ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အမျိုးသားများအမျိုးသမီးများသွားလေးခုအမျိုးအစားများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: အောက်တိုဘာ. 29 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
လူတစ်ဦး၏နှလုံးဖို့အဓိကသော့ချက်ကသူ့အစာအိမ်မှတဆင့်မဟုတ်ပါဘူး. ဒါဟာသူ့စိတ်ကနေတဆင့်. စိတ်ပညာနှင့်စူးစမ်းလေ့လာမှု၏အသုံးပြုမှုကိုတိုတောင်းတဲ့-term အချစ်ဇာတ်လမ်းသို့မဟုတ်ရာသက်ပန်ပျော်ရွှင်မှုကသင့်အိမ်မက်များနှင့်ခဲ၏ထိုလူကိုအနိုင်ရနိုင်. သင်သည်သင်၏အသက်တာတွင်ဤအချက်မှာရှာကြသည်မည်သို့ပင်. သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုသိမှရယူခြင်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့ကို tick ကိုသော့ချက်ဖြစ်သည်နှင့်ခိုင်မြဲစွာသူတို့သည်စိတ်နှလုံးထဲ၌အရပ်သို့သင်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်. အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျော်လောက်လေးခုအမျိုးအစားများဖြစ်ပါသည်’ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုသင်ကလူသည်သင်တို့အဘို့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါ Cool Dude
အေးမြတဲ့ကောင်လေးသည်သူ၏အသက်တာထဲမှာလူတွေအများကြီးရှိသည်လေ့အဘယ်သူသည်ကောင်လေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာကျွန်တော့်ရဲ့တစ်ဦးနောက်လိုက်နောက်ပါရှိပြီးသူတစ်ဦးနှင့်အတူရှိနေသောနိုင်ပါသည်တူ. ဒါကြောင့်အကျိုးဆက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုမိမိအကမ္ဘာပေါ်တွင်အ Peck အမိန့်ဆင်းဖြစ်ရစေခြင်းငှါ,. Appearances အေးမြတဲ့ကောင်လေးမှအရေးပါလှသည်. ဒါကြောင့်သူကကျီကိုနောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းဒါမှမဟုတ်သူကအအေးခံကောင်လေးခပ်သိမ်းသောကာလမှာယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူကျင်လည်တတ် anti-ဖက်ရှင်ရပ်တည်ချက်ယူအဆမှာ Over-စိတ်ချယုံကြည်အပေါ် boarder နိုင်မလား. တစ်ဦးအေးမြကောင်လေးအာရုံစိုက်၏ဗဟိုဖြစ် likes သူ့ကို upstage မှသင်ကြိုက်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအာရုံစိုက်ပါစေမည်မဟုတ်. Cool အခြားအေးမြယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများတူယောက်ျားတွေနှင့်သင် nerdy ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါကဒါကြောင့်အေးမြလူနှင့်ကိုယ်ကိုဝန်းရံထိုသူသည်ရိုးရှင်းစွာသူ၏အသက်တာတွင်သင်သည်ရှိသည်မမတတ်နိုင်ကြောင်းသင်တို့နှင့်အတူအ်မေတ္တာတော်၌ဒီတော့င်တိုင်အောင်သူ့ကုမ္ပဏီ၌သူတို့ကိုပြသဖို့မကြိုးစားနဲ့ ကျိန်းသေသူ၏အဆွေခင်ပွန်း၏မျက်မှောက်၌ထိုသူတို့အားမပြကြဘူး! သူတို့သည်အခြားသောလူမျိုးကိုယူသောကြောင့်အေးမြအိမ်အပြန်မှာအများဆုံးထက်၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေများကိုပိုနားထောင်လေ့’ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်ခြင်းကိုကျော်သောဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ထင်မြင်ယူဆချက်မျက်နှာပျက်မသွားသကဲ့သို့.
အမြင့်ဆုံးသောမျက်မှောင်ကြုတ်ပြီးကောင်လေးအမြဲ dapper ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တစ်ဦးဝတ်စုံအတွက်ကြည့်ရှုသောသူကောင်လေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်. သူကဂီတအတွက်မထင်ရှားတဲ့အရာနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်လေ့, စာပေ, စသည်တို့ကို … ဒါပေမဲ့အဲဒီနယ်ပယ်များတွင်မထင်ရှားတဲ့အရာများ၏ပိုမိုကြားဖူးတယ် element တွေကို like နှိပ်သို့ veers ဘယ်တော့မှမ. သူတို့အတော်လေးသင့်လျော်ရှိပါသည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသောသူတို့သည်ပေါ်လာလိုဘယ်လိုခေါ်လဲကြောင့်ဖြစ်သည်: ဉာဏနှင့်သင့်လျော်သော. အေးမြတဲ့ dude လိုပဲ
အပြင်ပန်းအမြင့်မားမျက်မှောင်ကြုတ်ပြီး bloke ဖို့အရေးကြီးတယ်. လူသည်ဤအမျိုးအစားမှလွန်းတဲ့ snobbish element ကရှိလေ့ရှိတယ်. Reality TV နဲ့တူသူ့ကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုစွန့်ပစ်နေကြသည်. ဤကဲ့သို့သောလူနှင့်အတူရရန်သင်သည်သင်၏မထင်ရှားတဲ့အသိပညာအပေါ်ကိုတက်တိုက်နှင့်အတော်လေးခေတ်မီဆန်းပြားနှင့်ပြေပြစ်ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သို့သော်ထိုဖြစ်စဉ်တွင် snobbish ဖြစ်လာမှမကြိုးစား. သင်ခဲ့တာတစ်ဦး snob မပါဘဲကိုယ့်ဟာကိုယ် snob ချိန်းတွေ့နိုင်တယ်အောက်မေ့တော်မူပါ. အမြင့်ဆုံးသောမျက်မှောင်ကြုတ်ပြီး bloke နှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်နောက်ထပ် element ကထွက်စား. သူကစျေးပေါအစားအစာသို့မဟုတ် Macdonald နှင့်အတူတစ်ဦးကဖီး၌သေဖမ်းမိခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်မဟုတ်. ဒါဟာဖြစ်နိုင်သူ့ကိုသင်နှင့်အတူမျှော်အဆုံးသတ်မယ်လို့ပိုပင်လယ်စာသို့မဟုတ်ပါးစ်ဘားတန်းကိုဖြစ်လို.
အဆိုပါ Boy-Next ကို-Door
ထိုသူငယ်-လာမည့်-တံခါးကိုသင့်သန့်ရှင်းသော-cut ဖြစ်ပါသည်, မွှေးသောကောင်လေး. သူကမင်းကိုမသောက်ပေမယ့်မ likes နှင့်သူသည်အလွန်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဂီတကြိုက်လေ့ရှိတယ်, TV က, စသည်တို့ကို … ကောင်လေးက-လာမည့်တံခါး ပတ်သက်. အထင်မှားသူဖြစ်ကောင်းမမှန်ကန်သောအရာအားလုံး၌ချိုသောအရသာနှင့်အလင်းဖြစ်တယ်. သူတို့ကသင့်ကိုအံ့သြနိုင်. သူတို့သာပုဂ္ဂလိက၌သင်တို့ကိုပြသသောအဲဒီမှာဗရုတ်ဘက်ဖြစ်နိုင်ရှိပါတယ်. မျှော်လင့်သင်တို့ကို ထောက်. အိပ်ခန်းထဲမှာ! သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြပါစေသူတို့နေသောပြောင်းလဲပစ်ရန်မကြိုးစားပါဘူးသင်တို့မူကားထိုသူတို့သည်မိမိတို့ဘေးကင်းလုံခြုံ image ကိုနောက်ကွယ်မှနဲ့တခါတလေယောက်ျားလေးတွေ-လာမည့်တံခါးတွေအများကြီးနှင့်အတူအမှုဖြစ်သကဲ့သို့ထို domain မှာသူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှထွက်ခွင့်ပြုခြင်းမခံရသည်ဟုခံစားရပါက ထို့နောက်ညင်သာစွာသင်အစစ်အမှန်သူတို့နှင့်လည်းလိမ့်မည်ကြိုက်သောသူတို့ကိုပြခြင်းအားဖြင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့သူတို့ကိုအားပေးတိုက်တွန်း. ထုတ်တယောက်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပါစေရန်ခက်ခဲဖြစ်သကဲ့သို့၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားမှာပြုသောအမှုရရန်လိုအပ်သည်ကြောင့်သို့သော်ခက်လွန်းတွန်းအားပေးမ.
အဆိုပါ Nerdy လူသား
အဆိုပါ nerd မထင်ရှားတဲ့အမှုအရာတွေအများကြီးကိုသိရှိခြင်း၏သဘော၌မြင့်မျက်မှောင်ကြုတ်ပြီး bloke ဆင်တူသည်. ဆန့်ကျင်အဖြစ်သို့သော် nerd ပြပွဲသောအရာတို့ကိုကို like နှိပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘယ်လောက်အသိဉာဏ်ကိုပြခြင်းငှါသူတို့ဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာကြိုက်လေ့ရှိတယ်. မကြာခဏသူတို့အားမထင်ရှားတဲ့အရာအားလုံး posh နှင့်သင့်လျော်သောမဟုတ်ပါ. အဆိုပါ nerd အလွန်စစ်မှန်ကြောင်းနှင့်အပြင်ပန်းအကအားလုံးကိုအရေးမပါ. ရော့ခ်ကနေ hippies မှ Whovians မှ nerds ၏ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် (Doctor ကအဘယ်သူသည်ပရိသတ်များ) နှင့် Sci-Fi ပရိသတ်များ. သူတို့ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့လူမျိုးဖြစ်ကြ၏ဒါပေမယ့်လူတွေက nerds ဘုံအထင်မှားဖြစ်သည့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများအတွက်အပူတပြင်းထင်ပါတယ်ကြောင့်မကြာခဏကူး. Nerds အခြားမည်သူမဆိုကဲ့သို့ဇီဇာကြပြီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၌ကောင်းသောစကားပြောဆိုမှုရှာဖွေရန်ကိုချစ်. မကြာခဏ nerds အတိတ်တွင်ချခဲ့ကြသောကြောင့် nerd တစ်ဦးပင်ပန်းရှိလေ့ရှိတယ်. ဘယ်သူမဆိုကွဲပြားခြားနားရိပ်မိဤမျှခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်ယုံကြည်မှုကိုတစ်ဦးပွိုင့်မရှာဖွေမတွေ့ရှိနှင့်အတူတက်ထားရန်တွေအများကြီးရှိသည်မ. ထိုသူတို့နှင့်ကိုယ်ကိုဖြစ်သက်သာပေမယ်သင်ပွင့်လင်းစိတ်ထားရှိနေကြသည်သက်သေပြနိုင်လျှင်ဤစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလို့အများအားဖြင့် nerds ရက်စွဲအခြား nerds လေ့, ပျော်စရာ, နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးလှပတဲ့ဆက်ဆံရေး.